DEG DEG+DAAWO: Deni oo xabsiyada buuxinaya & Ictisaam oo ku dhawaaqay – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomePuntlandDEG DEG+DAAWO: Deni oo xabsiyada buuxinaya & Ictisaam oo ku dhawaaqay
DEG DEG+DAAWO: Deni oo xabsiyada buuxinaya & Ictisaam oo ku dhawaaqay
July 21, 2019 Ali Osman Puntland, Soomaliya, Wararka maanta 13
Wararka naga soo gaaraya magaalada Boosaaso ayaa sheegaya in caawa ay ciidamada amniga ee Puntland ay qabteen mid kamid ah culumada ugu caansan Puntland oo lagu magacaabo Maxamed Macalin, kaas oo katirsan kooxda Al Ictisaam oo kadhisan Puntland.
Sheekh Maxamed Macalin Axmed ayaa ahaa gudoomiyaha guddiga dhismaha laamiga magaalada Boosaaso, waxaana xarigiisa si weyn looga hadal-hayaa gudaha magaalada Boosaaso.
Saddex xubnood ayaa horay loo xiray, waxaana la sheegay in Sheikh Maxamed Macalin Axmed uu safar ku maqnaa, Guddiga ayaa diiday iney celiyaan lacag uga timid DFS.
Dawladda Faderaalka ayaa lacag dhan 150Kun geysay magaalada Boosaaso, wixii xiligaas ka dambeeyeyna xiisad ayaa ka dhalatay lacagtaas, ka dib markii ay dawladdu ka carootay talaabadaas.
Degdeg:- Ciidamada Puntland oo xabsiga dhigay masuul kale oo kashaqeynayay Boosaaso.
DAAWO VIDEO:Gabadh Reer Hargeysa oo Madaxweyne Farmaajo cayday Iyo Muqdisho
Deni waa inuu soo xiraa Farmaajo iyo Khayre, maxkamadda sare ee dawladda puntland waa inay u jartaa waaran lagu soo qabanayo shakhsi kastaa ooo Ka horyimado madaxwaynaha dawladda hooyada federalka Deni, Dawladda hooyada federalka ee puntland iyada mas’uulka ah dalka somalia 🇸🇴. Boowe Aa la tahay kkkk kkkk kkk kkk bal adba.
Xaajigoow salaan gobeed iga guddoon marka ugu horreeya. Salaantaas bacdigeeda waxaan jacelahay in aad ku la socodsiiyo in aad teer iyo cimradaadii (Eebbe ha kuu aqbalo ee) xaggayga ka tahay ahlu sharaf iyo nin agtayada qiimo ka leh. Ixtiraam gaar ah oo dheeri ah baad naga mudan tahay mar haddii aad Al-Xaramul Shariif Ilaahay ugu marti noqotay. Waa na isla qaddarinta dheeria ah ee aan u hayo Suldaankeena Sharafta Huwan ee Dab La Riday oo isagu na sidaada Xaaji ah oo nasiib u yeeshay in uu Rabbi Xaramkiisa ku soo booqdo. Adigu ba agtayda waad ka amaanan tahay.
Waxaan haddaba maanta laga billaabo Xaaji Atooroow (anagu Atoore ma nidhaahno ee) adiga iyo Sacaadatul Suldaan Dab La Riday idiin ku soo dhex tuuray cimaamad iyo go’ shaal ah. Xujaay iyo issimo fac weyn baydun agteena ka tihiin oo aan anigu si gaar ah u xaq dhawrayaa. Waxii hadda ka dambeeya xasaanaddaas idin ka dhexeysa iyo sha’nigeeda fadligiisa ayaydun isku qaddarin doontaan oo la isku cafin doonaa Eebbe idamkiisa. Sidaas ha inoo ahaato Xujaydaay.
Aan si kaftan ah u idhaahdee labadan nin eed Xaajiyada ku sheegtey eed is leedahay nabad kala dhexdhig weligood heshiin maayaan.
Nina caadadiisa ma daayo bahalna ceydhiinka ma dhaafo.
Bal car ka kar Dab La Ridey juqajuqeynta Atoore. Atoorena ka kar ka daba gunuunuca Dab La Ridey iyo dadka kaloo dhan. Kkkkkkkkkkkkkkkk
Nice try though. Kkkkk
Maanta qosol dheer baad iga rakaadisay runtii. Horta Ahmedoow qofku mar ba haddii uu Xaramka Eebbe foodda soo galiyay anigu aad baan uga dambeeyaa oo uga gaabsadaa.
Xaqiiqdii waxaan awal is lahaa Atoor waa reer Gaalkacayood oo kaftanka iyo xifaaltanka waxuu ku yahay naar ololaysa oo sinsaarooyin ba’an buu Suldaanka ciidda afka u dari doonaa, laakiin waxaa iiga if baxay in uu iska Xamraawi yahay oo aanu Suldaanka kaftankiisa hanfafka ah xamili karin. Suldaanku waa raggeedii oo waa bulshaawi asal ah. Laakiin waa dadka naadirka ah ee qalbiga ka nadiifta ah oo aan uurka xuma ku qaadanin.
Hadda se waxay ku qurux badnaatay in aan soo kala dhexgalo si aanay xabbuduhu inteenan kale nagu soo faniinin. Dee adba golaha issim baad ka tahay ee bal cimaamadda soo tuur Ahmedoow.
Labada ba waan xantay ee Eebbe iyo iyagu ba ha iga cafiyeen Inshaa-Allaah.
Anaga iyo salebanadii way na sidataaye
budhlayney sidii hore socon maysee dhako kale keen
Xaaji Saalaxoow malaha 3 sano hortood baan halkan ka soo duuliyay talada ah labada Woqooyi toos ha iskugu darsameen oo Northern Power House ha ku soo baxeen. Idinkii baan MJ la idin tusi karin oo waydun naga dhabqiseen.
Anigu fursad lama helaan ah oo wallaahi cajiib ah baa iiga dhex muuqata labada Woqooyi oo nadaam guud oo dawladeed isla qaata oo waxaa ugu horreeya Soomaaliweyn oo dhan ayuu waa cusub oo lagu diirsado u hiran lahaa. “niin”-ta iyo “dha’da” na tartiib baynu uga masixi lahayn ( waxaan isleeyahay wax kalluunka ku jira ayaa maskaxdooda qaybta hadalka ka yar galaafta – speech impairment).
madaxweyne deni hawshaada iska wado
Anaguna caawa dhahar baanu samo kuwaar kaqaadayna.
Woxoogay lacagana waanu kuu soo diri ood gadheerta iskaga celiso
Nin ssdf ahaa oonu jaar ahaan jirnay baa iiga shekeyay
In barigii ay soo galeen garoowe iyo bari ayaanu shirnay,saa waxanu
goaan ku gaadhnay inaanu goboladii
woqooyi la midawno dsbeeto rag baanu u dirnay shirkii burco
si ay ugu so bandhogaan qadiyadaa
Wuxuu yiri nasiib daro intey dhexda
Sii socdeen ayaaba lagu dhawaaqay somaliland.
Arinkaasi waa xaqiiiq.
Anigu waxaan soo kala dhexgalayaa nimankaas markey qoryo isku soo qaataan. Intey jaafaajiriqleynayaanse weyba iigu baxdaa. Kkkkkkkkk
Back & forth koodu qeyb muhiim ah ayay ayay Reer Marqaan weyne ugu fadhidaa. Dee qosolka yar waa loo baahan yahaye hana xidhin. Kkkkk
Waar waa comic relieve iska xaraabeyso. Kkkkk
Dee anba xantaas Illahay iyo iyaguba ha iga cafiyeen. Inkastoon ku kalsoonahay in ay labaduba deyn ii raaci doonin. Waayo dee waa rag wanwanaagsan oo lala kaftami karo.
Wixii xun oon la dhameyn, Puntland ma hagageyso. waxa qaska wadaa Waa Xagjirka ictisaam, waa dad meel walba laga soo eryey idinkuna hoy ayaa guryihiina uga dhigteen, walee ama maamul ayaa jiya ama iyagaa talinaya, war ragaan masar iyo carab oo dhan ayaa laga soo eryry, Kelebkii soo cararaa ma idinkaa qaabiley, walee war baa soo socda. waa in la wada xiraa ee waliba la laayaa, Xaraanta.
1.Marka hore anigu ma ihi dadka dadka caaya oo waan ka dhawrsadaa cayda intii itaalkay ah.Oday dab La Ridayna ooduu ka qaadaa oo waxba ma kala reebo markay ku kacdo.Taas baan ku kala duwanahay aniga iyo Dabka.Haddii anan dhawrayn anshaxa Islaamka Dab La Riday iguma dhamma Af-soomaali iyo jawaab celintiis ee waanan rabin in aan ku hadlo hadalo aysan ahayn in uu ku hadlo qof weeyn oo waliba muslim ah.Ugu dambayn Dab La Riday iyo aniga waxba nama dhexyaaliin ismana waji naqaan ee arintu waa iska fadhi ku dirir.
2.Adigaa mudan xaq dhar iyo xushmadba.Waana inagu wada waajid in la is xushmeeyo had iyo jeerba.
3.Soo Xajintu waa inagu waajib taagan.Cismaanoow haddaad mar tagi lahayd Makka iyo Madiina waxaad is oran lahayd markasta oo ad wakhti u heshid ha ka baaqan.Ramadaankii dhaweeyd baan tagay Makka.Waxaana yimid dad ku dhawaa 8 million people.Meel la kala maraa la waayey.Labada xaramna waxaa markastaba ka socda dhismayaal oo every year waa la kordhiyaa.Labada xaram midkastaba waa magaalo yar lagumana sheegi karo masaajid kaliya.8 malyuun oo qof meel ay ku tukanayso lama oran karo waa masaajid.
Rag iyo dumar saas baa la isu jiirayaa oo qofkastaba dan weeyn bay niyadiisu haabanaysaa.Waxaa xaramada saas u dhex wareegaya boqolal askar ah oo kala nooca.Habeen iyo maalin kala garan maysid.Waayo intaba waa la cibaadaysanayaa.Dadbaa ayagoo tukanaya dhacaya.Salaadkasta oo la tukanayo waxaa la tukanayaa Jinaaso dad dhintay.Intaas oo qof baa malintii ama habeenkii lagu tukanayaa.Markii salaad la tukadaba waxuu imaamku oranayaa waa salaadii jinaasada.Imaamkuna meel uu kaa jiro garan maysid.Calaa kulli xaal ka hadalka xajiku waa sheeko dheer oo Insha Allaah markalaan qaar ka soo qaadi doonaa.Arimo aad u badan baa iiga soo siyaaday tagidii an tagay Makka iyo Madiina.Hadda ka hor baan xajiyey,laakiin waagaas an xajiyey iyo hadda wax isu dhaw ma aha oo meelkasta waa la casriyeyey.Waliba Masaajidka Madiin waxaan ku qiyaasay in uu hadda yahay meesha dunidaan oo dhan ugu quruxda iyo naqashadaha badan.Walina dhismaa ku socda labada xaramba.Dawlada sacuudigu waxay labadaas xaram galisaa dhaqaalo ad iyo aad u badan.
Insha Allaah waa inoo markale.U sheega Xaaji Saalax in uu uruursado lacag uu ku soo xajiyo.Waliba dadka jooga Yurub way u sahlan tahay soo xajintu.Sababtoo ah yurub meesha ugu fog waa 7 hours flight to Jeddah.Meesha Australia iyo North America ay tahay 12 hours illaa 17 hours none stop flight.